David Leavitt - Mpisolovava amin'ny indostrian'ny rongony - Mpisolovava amin'ny orinasa marijuana manana fahazoan-dàlana
Mpisolovava - Massachusetts
Mpisolovava rongony any Boston, David Leavitt, nahazo alàlana hanao lalàna any Massachusetts nandritra ny 20 taona mahery. Amin'ny maha mpisolovava ny fanavaozana rongony dia mino izy fa tokony ho re avokoa ny feo rehetra. Nahazo diplaoma tamin'ny fandaharana momba ny mari-pahaizana momba ny mari-pahaizana momba ny rongony ao amin'ny University Clark's University, Leavitt dia niditra an-tsehatra tamin'ny fizotran'ny mpangataka ara-tsosialy ho an'ny fahazoan-dàlana hividianana rongony Massachusetts.
David dia matihanina amin'ny fitantanan-draharaha. Izy dia mitantana am-pahavitrihana sy amin'ny fomba mamorona asa, filan'ny fikambanana ary mpiaramiasa miasa miaraka ary miasa mifanaraka amin'ny politikan'ny orinasa, ny fomba fiasa ary ny filozofia.
David dia manana traikefa midadasika mandray anjara amin'ny tanjaka sy ny fitoniana eo amin'ireo orinasa ao amin'ny indostria, ny tanjany dia misy ny famakafakana ny valiny sy ny fanaovana tolo-kevitra momba ny paikady. Izy dia mpampita hevitra mandresy lahatra izay manampy azy hanorina fifandraisana maharitra mba hahazoana antoka ny fahombiazana tsara indrindra, fihaonana amin'ny tanjona sy ny valin'ny fandaminana.
Makà hevitra amin'ny rongony miaraka amin'i David
Ento any amin'ny ambaratonga manaraka ny orinasa rongony
60 - 75 fanadihadiana mandritra ny minitra miaraka amin'i Tom amin'ny orinasanao
Fanadihadiana momba ny vidin'ny asa tanana
Mampiasà olon-dehibe fanadihadiana momba ny fandaniam-bola
Paikady fampiharana sy famakafakana
Famerenana ireo mpangataka ara-tsosialy
Fomba fitadiavam-bola sy fitakiana
Fironana mipoitra ho an'ny indostriao
Kopia nosoratan'i Tom's Book momba ny lalàn'ny rongony
$ 500.00 Fihenam-bidy amin'ny famatsiam-bola amin'ny ho avy
Jereo izay lazain'ny sasany amin'ireo mpanjifanay mahomby momba ny asantsika miaraka. Mirehareha be izahay amin'ny fiantohana ny fenitra avo indrindra amin'ny fahafaham-pon'ny mpanjifa.
Tom no mpisolovava marina raha toa ianao ka mpampiasa vola liana amin'ny indostrian'ny rongony sy Hemp any Illinois.
Hunter Devo, Tale Jeneraly @ Delta-8 Hemp Co.
Tena nanampy be i Thomas ary mahalala tsara ny indostria noho ny mpisolovava hafa niresahako.
Michael Phillips, mpangataka any Illinois mahomby
Ny consultation dia informative ary nanampy ahy hitety ilay dingana sarotra. Hanoro hevitra ny serivisin'izy ireo aho.
Manaja ny fiainanao manokana izahay.
Momba ny rongony Insider. Natolotra eo am-baravaranao.
Ento any amin'ny ambaratonga manaraka ny orinasanao amin'ny alàlan'ny fahazoana manokana torohevitra, paikady ary vaovao farany momba ny ara-dalàna.